Disadvantages of Apple's macOS - Technoland Myanmar
Disadvantages of Apple’s macOS
Posted on January 9, 2019 by Technoland Editor
macOS ဟာ Windows ထက်ပိုကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပေမယ့် အားနည်းချက်တွေလည်း အနည်းနဲ့အများတော့ရှိနေပါတယ်။ ဒီ article လေးမှာတော့ macOS ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဘယ်အချက်တွေမှာ mac က Windows ကိုမယှဉ်နိုင်လဲ ဆိုတာ တချက် ကြည့်လိုက်ရအောင်….။
1. Mac Computers တွေက ဈေးကြီးပါတယ်။
Apple ဟာသူရဲ့ product တွေကို ဈေးကြီးကြီးနဲ့ရောင်းချတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအသိပါပဲ။ Hardware component ချင်းတူရင်တောင် Windows PC တွေဟာ Mac PC တွေထက်ဈေးအများကြီးပိုသက်သာ လေ့ရှိပါတယ်။ MacOS ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် Mac PC တွေမှာပဲ အသုံးပြုခွင့်ရတဲ့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများပါတယ်။ (Hackintosh လုပ်ပြီးပြီး Windows PC တွေမှာလည်း macOS ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။)
2. Hardware upgrade လုပ်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး။
Mac Computer တွေမှာသုံးထားတဲ့ Hardware component တွေဟာ design အရသေချာပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် upgrade လုပ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ Windows pc တွေမှာတော့ design ကိုရော component တွေကိုရောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ pc ရဲ့ တာရှည်ခံမှုမှာလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါ တယ်။ Mac မှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပျက်သွားတာနဲ့ device တစ်ခုလုံးသုံးလို့မရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပြီး Apple ရဲ့ Tech support လိုအပ်မှာပါ။ Windows မှာတော့ ပျက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကို ကိုယ့်ဘာသာလဲလို့ရနိုင်ပါတယ်။
3. Game ဆော့ဖို့အဆင်မပြေပါဘူး။
Game တွေဟာ MacOS အတွက်ထက် Windows အတွက်ထွက်တာပိုများတဲ့အတွက် MacOS ပေါ်မှာ ဂိမ်းတွေသိပ်မစုံပါဘူး။ ပြီးတော့ hardware အရလည်း Windows computer တွေမှာဆို အလွယ်တကူ upgrade လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် GPU မလုံလောက်တဲ့အခါ GPU ဝယ်လဲလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေပေမဲ့ Mac မှာတော့ အဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် macOS ဟာ gamer တွေအတွက်လုံးဝမသင့်တော်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ် ။
4. macOS မှာ Windows လောက် software မများပါဘူး။
MacOS ရဲ့ Appstore မှာ software ဘယ်လောက်ပဲများလာတယ်ပြောပြော developer တွေ၊ အထူးသဖြင့် software companies အသေးလေးတွေက software တစ်ခုရေးတော့မယ်ဆိုရင် Windows ကို အရင် target ထားနေတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် Windows မှာ macOs ပေါ်မရောက်သေးတဲ့ Software တွေအများကြီးရှိနေ ပါသေးတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို Game တွေကလည်း Windows မှာပိုပြီးများပါတယ်။
5. Windows product တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး။
Mac OS ကနေ Windows ကို word documents တွေကူးလို့ရနိုင်ပေမယ့် အရမ်းတော့အဆင်မပြေ ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ mac က Word document ကို print ထုတ်ဖို့အတွက် Windows computer မှာကူးလိုက်ရင် format တွေအကုန်ပြောင်းပြီး နေရာတကျမဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ file တွေကို computer တွေပြောင်းပြီးအသုံးပြုနေရတဲ့သူဆိုရင်တော့ Operating system တစ်ခုတည်းပဲအသုံးပြုတာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
macOS ဟာ Windows ထကျပိုကောငျးတဲ့အခကျြတှရှေိပမေယျ့ အားနညျးခကျြတှလေညျး အနညျးနဲ့အမြားတော့ရှိနပေါတယျ။ ဒီ article လေးမှာတော့ macOS ရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ဖျောပွပေးသှားပါမယျ။ ဘယျအခကျြတှမှော mac က Windows ကိုမယှဉျနိုငျလဲ ဆိုတာ တခကျြ ကွညျ့လိုကျရအောငျ….။
1. Mac Computers တှကေ ဈေးကွီးပါတယျ။
Apple ဟာသူရဲ့ product တှကေို ဈေးကွီးကွီးနဲ့ရောငျးခတြယျဆိုတာလူတိုငျးအသိပါပဲ။ Hardware component ခငျြးတူရငျတောငျ Windows PC တှဟော Mac PC တှထေကျဈေးအမြားကွီးပိုသကျသာ လရှေိ့ပါတယျ။ MacOS ဟာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ Mac PC တှမှောပဲ အသုံးပွုခှငျ့ရတဲ့အတှကျ ငှကေုနျကွေးကမြားပါတယျ။ (Hackintosh လုပျပွီးပွီး Windows PC တှမှောလညျး macOS ကိုအသုံးပွုလို့ရပါတယျ။)
2. Hardware upgrade လုပျရတာအဆငျမပွပေါဘူး။
Mac Computer တှမှောသုံးထားတဲ့ Hardware component တှဟော design အရသခြောပွုလုပျထားတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ upgrade လုပျဖို့မလှယျကူပါဘူး။ Windows pc တှမှောတော့ design ကိုရော component တှကေိုရောစိတျကွိုကျပွုပွငျပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ pc ရဲ့ တာရှညျခံမှုမှာလဲအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါ တယျ။ Mac မှာအစိတျအပိုငျးတဈခုပကျြသှားတာနဲ့ device တဈခုလုံးသုံးလို့မရတာမြိုးဖွဈသှားနိုငျပွီး Apple ရဲ့ Tech support လိုအပျမှာပါ။ Windows မှာတော့ ပကျြတဲ့အစိတျအပိုငျးကို ကိုယျ့ဘာသာလဲလို့ရနိုငျပါတယျ။
3. Game ဆော့ဖို့အဆငျမပွပေါဘူး။
Game တှဟော MacOS အတှကျထကျ Windows အတှကျထှကျတာပိုမြားတဲ့အတှကျ MacOS ပျေါမှာ ဂိမျးတှသေိပျမစုံပါဘူး။ ပွီးတော့ hardware အရလညျး Windows computer တှမှောဆို အလှယျတကူ upgrade လုပျလို့ရတဲ့အတှကျ GPU မလုံလောကျတဲ့အခါ GPU ဝယျလဲလိုကျတာနဲ့အဆငျပွပေမေဲ့ Mac မှာတော့ အဲ့လိုလုပျလို့မရပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ macOS ဟာ gamer တှအေတှကျလုံးဝမသငျ့တျောဘူးလို့ပွောလို့ရပါတယျ ။
4. macOS မှာ Windows လောကျ software မမြားပါဘူး။
MacOS ရဲ့ Appstore မှာ software ဘယျလောကျပဲမြားလာတယျပွောပွော developer တှေ၊ အထူးသဖွငျ့ software companies အသေးလေးတှကေ software တဈခုရေးတော့မယျဆိုရငျ Windows ကို အရငျ target ထားနတေုနျးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ Windows မှာ macOs ပျေါမရောကျသေးတဲ့ Software တှအေမြားကွီးရှိနေ ပါသေးတယျ။ အပျေါမှာပွောခဲ့သလို Game တှကေလညျး Windows မှာပိုပွီးမြားပါတယျ။
5. Windows product တှနေဲ့ကိုကျညီမှုမရှိပါဘူး။
Mac OS ကနေ Windows ကို word documents တှကေူးလို့ရနိုငျပမေယျ့ အရမျးတော့အဆငျမပွေ ပါဘူး။ သငျ့အနနေဲ့ mac က Word document ကို print ထုတျဖို့အတှကျ Windows computer မှာကူးလိုကျရငျ format တှအေကုနျပွောငျးပွီး နရောတကမြဖွဈတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ file တှကေို computer တှပွေောငျးပွီးအသုံးပွုနရေတဲ့သူဆိုရငျတော့ Operating system တဈခုတညျးပဲအသုံးပွုတာက ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။
This entry was posted in Knowledge and tagged Apple, MacOS, Tech Knowledge, Windows.
Interesting products from CES 2019 Part-I
Interesting Products from CES 2019 Part II